अब प्याचअप- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं — नरगिस फाखरी र उदय चोपडाको सम्बन्ध साउनेझरी जस्तो छ । प्याचअप र ब्रेकअपको कुनै टुंगो हुँदैन । कहिले मिलिरहेका हुन्छन् त कहिले बाझिरहेका । केही अघि मात्रै उदयले विवाह गर्न नमानेकाले दुईबीच मनमुटाव भएको खबर बाहिरिएको थियो । त्यही बेला अभिनेत्री नरगिस झोलाझ्याम्टा कसेर एकाएक अमेरिका फाल हानेकी थिइन् ।
नरगिस फाखरी र उदय चोपडाको सम्बन्ध साउनेझरी जस्तो छ । प्याचअप र ब्रेकअपको कुनै टुंगो हुँदैन । कहिले मिलिरहेका हुन्छन् त कहिले बाझिरहेका ।
केही अघि मात्रै उदयले विवाह गर्न नमानेकाले दुईबीच मनमुटाव भएको खबर बाहिरिएको थियो । त्यही बेला अभिनेत्री नरगिस झोलाझ्याम्टा कसेर एकाएक अमेरिका फाल हानेकी थिइन् ।
अहिले फेरि उनीहरू एकजुट भएको बताइन्छ । दुवै एकअर्काको विशिष्ट साथ पाइरहेका छन् । यहाँसम्म कि, नरगिस उदय र उनकी आमासँग मुम्बईमै बस्न थालेकी छन् ।
उनीहरूको विवाहसम्बन्धी खबर पनि मिडियामा आउन थालेका छन् । यद्यपि, यो हल्ला हो वा यथार्थ भन्ने चाहिँ छुट्याउन सकिएको छैन । नरगिस र उदय आफूहरूको सम्बन्धका मामिलामा निकै गुपचुप रहने गरेकाले वास्तविकता पत्ता लगाउन गाह्रो परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेखगरेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०८:२१
काठमाडौं — पश्चिमाहरूका लागि डिसेम्बर विशेष महिना हो । हुन त अचेल पूर्वेलीहरू पनि डिसेम्बरमा पर्ने स्यान्टाज लिस्ट डे, क्रिसमस, कार्ड प्लेइङ डेजस्ता पर्व मनाउन थालेका छन् । यही बेला एड्स अवेरनेस डे, मानव अधिकार दिवसलगायत पर्छन् ।
अङ्ग्रेजी पात्रोको अन्तिम महिनालाई धेरै स्रष्टाले गीतमा उतारेको पाइन्छ । उहिलेका फ्रांक सिनात्रा, स्टिभ वन्डर, मर्ल ह्यागर्डदेखि अहिलेका टेलर स्विफ्ट, माइली साइरस, जे–जेड, लिंकिन पार्कजस्ता ब्यान्ड तथा गायक/गायिकाले डिसेम्बर सङ गाएका छन् ।
अमेरिकी रक–पप ब्यान्ड ‘द फोर सिजन्स’ को यो गीत निकै पपुलर छ । ड्रम र पियानोको ओपनिङ नै यति सुन्दर छ की सुन्दै नाचौं–नाचौं लागिहाल्छ । किबोर्डवादक बब गौडियोले लेखेको गीत सन् १९७५ मा रिलिज भएको थियो । यसका कभर भर्सन प्रशस्त बनेका छन् ।
अ लङ डिसेम्बर...
राम्रो भविष्यको कल्पना गरिएको यो गीत ‘काउन्टिङ क्रोज’ ब्यान्डको चिनारी हो । ब्यान्डका भोकलिस्ट एडम डुरिजले कार दुर्घटनामा परेका साथीलाई समर्पण गर्दै यो गीत तयार पारेको बताउने गरेका छन् । सन् १९९६ मा गीत बाहिर आउँदा यसले तहल्का मच्चाएको थियो ।
फ्लावर्स इन डिसेम्बर...
पाँच सदसिय ब्यान्ड ‘मेजी स्टार’ ले यो गीतमार्फत फरक स्वाद पस्किएको थियो । स्लो नम्बरको गीतमा केन्ड्रा स्थिमको स्वर सुनिन्छ । डिसेम्बरबारे गाइएको भए पनि गीत बाह्रै महिना सुनिरहुँ लाग्ने खालको भएको प्रतिक्रिया युट्युबमा दिइएको छ ।
गायक एड रोल्यान्डले आफ्नो ब्यान्ड ‘कलेक्टिभ सोल’ का लागि लेखेको गीत सन् १९९५ मा रिलिज भएको थियो । बिलबोर्ड हट हन्ड्ेरडको सूचीमा यो गीत २० औं नम्बरमा पुग्दा ‘रक ट्रयाक’ को लिस्टमा चाहिँ यसले पहिलो स्थान ओगटेको थियो ।
वान्स अपन अ डिसेम्बर...
सन् १९९७ मा बनेको म्युजिकल एनिमेटेड फिल्म ‘एनस्तासिया’ मा समाविष्ट यो गीत गोल्डेन ग्लोब अवार्डमा मनोनीत भएको थियो । डियाना कार्टरले पप भर्सनमा गाएको गीतलाई थुप्रै भाषामा अनुवाद गरिएको छ । फिल्म अवधिभर गीत तीन पटक सुनिन्छ जसमा फरक–फरक गायिकाले स्वर भरेका छन् । लन्सबरी र लिज कलवे, डियाना र आन्या मरिनाले यसमा स्वर दिएका छन् ।
आई ड्रिम अफ क्रिस्मस...
जर्ज माइकलको यो गीतले धेरैको मन जितेको छ ।
युट्युबमा यसको एनिमेटेड भिडियो मुन्तिर सबैले माइकलको तारिफ गरेका छन् । डिसेम्बरसम्बन्धि गीत गाएका माइकल सन् २०१६ को डिसेम्बर महिनामै परलोक भएका थिए । उनी बितेपछि डिसेम्बर सङ सुन्दा साह्रै पीडा भएको एक युट्युब युजरले उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
ब्याक टु डिसेम्बर...
पछिल्लो समय बनेका डिसेम्बर सङमा गायिका टेलर स्विफ्टको यो कम्पोजिसन बढी लोकप्रिय छ । यसमा टेलरले आफ्ना पूर्वप्रेमीसँग माफी मागेकी छन् । आफूले पहिलो पटक गीतबाटै कसैसँग माफी मागेको बताउने गरेकी छन् । झन्डै पाँच मिनेट लामो यो कन्ट्री पप सङमा अर्केस्ट्रा फ्लेभर आउने संगीत समीक्षकहरूको भनाइ छ ।
‘फेरि फेरि’ मा ऋचा–अर्पण
“अनुराग” मा एलिजाको ठुम्का
‘नेपालीहरुको मन जोड्ने प्रयास’
भुटानी सत्तालाई उपकारी बन्न आग्रह
कृष्ण पहाडी माघ १०, २०७४
नेपालका शिविरहरूमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूमध्ये झन्डै १ लाख १० हजारलाई पश्चिमा मुलुक मूलत: अमेरिकामा पुनर्वास गराइएपछि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भएको हो कि भन्ने कतिपयलाई...
चोरिएका हुन्, चोरिएका होइनन्
देवेन्द्र भट्टराई माघ १०, २०७४
अन्वेषक लैनसिंह बाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ कृतिको नामकामले नेपालको कला–सम्पदालाई फेरि पुनर्जीवन दिएको इतिहास त्यति पुरानो भइसकेको छैन । लैनसिंहकै छोरी कला अन्वेषक डा.डिना बाङ्देल...
वैदेशिक रोजगारमा जीवन सुरक्षा
सम्पादकीय माघ १०, २०७४
रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया पुगेका नेपालीमध्ये हजार हाराहारीले बर्सेनि ज्यान गुमाउने गरे पनि मृत्युदर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार र रोजगारदाता मुलुक एवम् कम्पनीबाट ठोस...
वाम एकताको मार्गचित्र
भरतमोहन अधिकारी माघ १०, २०७४
राष्टिय, अन्तर्राष्टिय राजनीतिक वृत्तमा हलचल नै पैदा गर्ने गरी गएको असोज १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । केन्द्रको प्रतिनिधिसभा...
मञ्जु र इन्दुहरुमा अडेको मुक्तिको सपना
मीना मरासिनी माघ १०, २०७४
राजधानी सहरभित्रका पुराना बस्ती, परम्परागत पेसा तथा सहरी गरिबका पीडा समेटिएको साझा सवाल कार्यक्रम केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा हेर्दा देशका दूरदराजका धेरैलाई पत्यार लागेन होला...
प्रदेश राजधानीको किचलो किन ?
नीरा भगत थारु माघ १०, २०७४
एउटा नीति कथा मैले बच्चामा सुनेकी थिएँ— कुनै देशमा एउटा बच्चा छोरा रहेछ । त्यो छोरा मेरो हो भनी दुई महिलाले दाबी गर्दै त्यो छोरा मैले...
कसरी चिन्ने सामाजिक सञ्जालमा आउने 'फेक न्यूज' ?
जगन कार्की माघ ९, २०७४
'फेक न्यूज' (गलत समाचार) दिनु कसैको स्वार्थमा हुन सक्छ, त्यो भन्दा खतरनाक कुरो सत्यतथ्य नै नबुझी यस्ता भ्रमपूर्ण खबर शेयर गर्नु, आवेशमा आएर उच्छ्रिंखल गतिबिधि...
माइतीघर मण्डला र तहरिर स्क्वायर
रमेशनाथ पाण्डे माघ ९, २०७४
अफसोचको कुरा हो— स्वप्नभंगका लक्षणहरू फेरि देखिन थालेका छन् । ६७ वर्षको प्रतीक्षापछि जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान बनेको पनि अढाई वर्ष भइसकेको छ । तर यसबीच पटकपटक संविधान...
संघीयता, विकास र स्थानीयता
सुरेश ढकाल माघ ९, २०७४
विकासको सम्भावनालाई स्थानीय तहमा लैजान नेपाललाई अहिले प्राप्त अवसर तथा यसमा देखिएका केही द्विविधाबारे प्रस्तुत आलेखमा हामी चर्चा गर्नेछौं । यस क्रममा हामी नेपालको संघीय संरचनाले...
भद्रगोल सार्वजनिक चिकित्सा
डा. ढुण्डिराज पौडेल माघ ९, २०७४
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकाको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सवाल विवादित बन्ने गरेको छैन । कारण स्तरीय, प्रतिस्पर्धामा आधारित र मूल रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहनु हो । यसका...